FIOMANANA MANDRITRA HO AN’NY VAOIM-BAOVAO NO ANTON’NY FOTOTRA TSARA – Gazety Potato System
BAYER MANOLOTRA VOKATRA MIARO TANY MAODERANA MAO HO AN'NY MPAMPIRY OVY, ITY LISTARY ITY dia ahitana azy roa fanta-daza eny an-tsena ary mampanantena vokatra vaovao.
Nivadika ho taona sarotra ho an'ny tantsaha Rosiana ny taona 2021, maro no manisa fatiantoka, fa ny taona 2022 ho avy dia feno risika tsy dia kely loatra.
ho an'ny tombom-barotra amin'ny orinasa ovy. Taorian'ny andiana adin-tsaina isan-karazany ny toetr'andro, fandaminana
- fitantanana ny vidiny eo ambanin'ny fiovaovan'ny vidiny ankehitriny eo amin'ny tsenan'ny fitaovana famokarana sy fivarotana ny vokatra vita. Amin'ity toe-javatra ity
zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny fanomanana matotra amin'ny vanim-potoana vaovao sy ny fahatakarana fa ny vidin'ny voa, ny sakafo ary, mazava ho azy, ny fiarovana ny zavamaniry no tena fampiasam-bola amin'ny fijinjana ho avy.
Ny rafitra fiarovana ovy matihanina dia tokony hanomboka amin'ny fitsaboana na fitambarana marina.
Ho an'ny toeram-pambolena manokana amin'ny famokarana ovy azo amidy amin'ny tambajotra sy ny kalitaon'ny indostria, ny vahaolana tsara indrindra dia ny rafitra-translaminar insect-fungicidal disinfectant EMESTO® QUANTUM, izay miaro amin'ny bibikely mikisaka sy mitsentsitra, ary koa ny aretina maharitra amin'ny voa ao anaty tany. .
Ny zava-mahadomelina dia misy clothianidin - ny mahery indrindra amin'ireo akora mavitrika amin'ny kilasy neonicotininoids: fanafody famonoana bibikely mifandray amin'ny tsinay. Misy fiantraikany tsara amin'ny voangory ovy Colorado, wireworm, scoop, olitra voangory, aphids ary ravinkazo - mpitatitra viriosy, bakteria ary phytoplasmas manomboka amin'ny fotoana fambolena ka hatramin'ny voninkazo. Ny singa fungicidal penflufen avy amin'ny kilasy pyrazole-carboxmid dia manakana ny dingana roa manan-danja ao amin'ny sela pathogen: ny respiration sy ny fananganana ny fonon'ny sela - miasa amin'ny dingana teo aloha.
pathogen ny taovam-pisefoana dingana noho ny strobilurins, mampihena ny mety ho cross-resistance. Mifehy ny endrika rehetra amin'ny fisehoan'ny rhizoctoniosis, volafotsy sy scab mahazatra, phomosis, alternariosis ary fingotra lo ny ovy. Ny Clothianidin dia manatsara ny fahaizan'ny zavamaniry mahatohitra ireo anton-javatra abiotika toy ny: hain-tany, fiovaovan'ny mari-pana, salinity, taratra UV. Ny Penflufen kosa dia manana fiantraikany matanjaka amin'ny fitomboana sy ara-batana amin'ny zana-ketsa.
Ny orinasa mirotsaka amin'ny fambolena ovy voa, dia manao safidy amim-pahatokiana hanohanana ny systemic translaminar fungicidal disinfectant EMESTO® SILVER, izay ahafahanao mifehy tanteraka ny rhizoctoniosis, scab mahazatra sy volafotsy.
Ny fomba fiasa roa amin'ny otrikaretina dia vokatry ny fitambaran'ny penflufen sy prothioconazole, izay misy fiantraikany amin'ny pathogen ao amin'ny mitochondria sy ny reticulum endoplasmic. Ny EMESTO® SILVER dia mandrisika ny firongatry haingana amin'ny toe-javatra tsy misy otrikaretina, izay mamela koa ny fifehezana ireo otrikaretina faharoa
Azo atao ny manodina akora voa na eo amin'ny latabatra fisoloana akanjo, na manao fanomanana mivantana amin'ny fambolena. Ho an'ny fanodinana tsy tapaka ny tubers, ny latabatra Potato Care MAFEX dia tonga lafatra. Zava-dehibe ny mitadidy fa ny zava-mahadomelina miaraka amin'ny fomba fiasa samihafa dia mitaky rano amin'ny taonina sy isaky ny hektara.
TSY MISY tsimparifary
Talohan'ny fiposahan'ny zana-ketsa ovy dia manana fotoana hitsidihana eny an-tsaha ny karazana tsimparifary maro, izay mandany ny zezika ampiharina sy ny hamandoana mamokatra. Ny fiovana ara-drariny mankany amin'ny famotsorana lalina, ny fananganana havoana passive ary, amin'ny ankapobeny, ny fisorohana ny mpikapa mavitrika dia miteraka enta-mavesatra fanampiny amin'ny fiarovana ny herbicidal ny ovy.
Ny herbicide vaovao vao mipoitra BANDUR® dia hanampy amin'ny fanalana ny ahi-dratsy.
Ny fanomanana dia azo antoka ho an'ny kolontsaina ary tsy misy famerana amin'ny fihodinan'ny vokatra manaraka. Ao amin'ny firafiny dia misy singa mavitrika tsy manam-paharoa - aclonifen, izay tsy misy analogues eto amin'izao tontolo izao. Ny Aklonifen dia manakana ny fampifangaroana ny karotenoida sy ny chlorophyll, mivezivezy amin'ny tavy meristematic amin'ny tsimparifary, mahatonga ny fiovan'ny zana-kazo sy ny zavamaniry tanora, mijanona ny fitomboana ary aorian'ny 2-3 herinandro.
maty izy ireo. Ny fandrafetana ny concentrate fampiatoana dia mitazona ny fahombiazan'ny fanomanana, mifindra monina kely amin'ny mombamomba ny tany na dia amin'ny rotsak'orana be aza ary manohy ny hetsika herbicidal aorian'ny orana. Ny zava-mahadomelina dia mifehy tsara ny gauze fotsy, mololo mikitroka, amaranth mivadika sy mahihitra, kurai mahazatra sy ny hafa, miatrika tsara ny bindweed tendrombohitra saro-pady.
Aclonifen ho toy ny akora mavitrika vaovao dia mety tsara amin'ny tetika manohitra ny fanoherana.
FIfehezana ny aretina
Aorian'ny fiposahan'ny tsimoka dia mila mandray fepetra hiarovana ny fitomboan'ny tanora amin'ny aretina ny mpamokatra fambolena. Mandritra io vanim-potoana io dia tapitra ny hetsika rafitra fiarovana ary manomboka ny dingana voalohany amin'ny fitsaboana fungicidal - amin'ny ankamaroan'ny tranga, miaraka amin'ny fiomanana amin'ny fifandraisana. Ny fungicide vaovao miaro amin'ny tranokala ANTRACOL® dia tonga lafatra ho azy, izay, ankoatry ny propineb, voaporofo eo amin'ny tsena eoropeana, ny 1 kg ny fanafody dia misy 157 g ny zinc (Zn) mora azo. Propineb dia tsy mihetsika isan-karazany
Anzima tafiditra ao amin'ny tsingerin'ny Krebs, ka manakorontana ny biosynthesis ny citrate. Zinc dia singa iray amin'ny ankamaroan'ny anzima tafiditra amin'ny fandrindrana ny fitomboan'ny zavamaniry ary singa tena ilaina amin'ny dingana fototra toy ny fizarazarana sela, ny fitomboana ary ny fanavahana. Izy no mifehy
fanjifàna gliosida ary manatsara mivantana ny asan'ny photosynthetic. Ankoatra izany, ny zinc dia mampihena ny famotsorana ny zavatra organika, ka mampihena ny fangatahan'ny sakafo ho an'ny pathogens.
ANTRACOL® dia mifehy ny aretina isan-karazany sy ny endrika mahatohitra ny pathogen tsy amin'ny ovy ihany, fa koa ny tongolo, voatabia, voankazo.
Ny kolontsaina, manentana ny fizotry ny biosynthesis ao amin'ny orinasa noho ny fisian'ny Zn ++ amin'ny endrika azo idirana, mampitombo ny kalitaon'ny vokatra, ny tsena ary
famokarana. Izy io dia singa tena tsara amin'ny fiarovana ny zavamaniry mitambatra amin'ny tara-pahavoazana sy ny haintany aloha, izay tena tsara ho an'ny
ho fitsaboana indray amin'ny tapaky ny vanim-potoana ary mifandimby tsara amin'ny fitsaboana miaraka amin'ny fungicide systemic INFINITO®. Mampihena ny herbicide
ary ny fihenjanana abiotika amin'ny ovy.
Marihina ihany koa fa mba hahazoana ny vokatra ambony indrindra amin'ny zava-mahadomelina dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny fotoana iray: amin'ny fiandohan'ny vanim-potoanan'ny fitomboana,
ary avy eo amin'ny dingana fametrahana tuber.
Isan-taona dia mitondra fanamby vaovao ho an'ny tantsaha, fa ny fisafidianana ny paikadin'ny fiarovana ny ovy sy ny fampiharana ny fitsipi-pifehezana tsy tapaka dia antoka fa ho tonga any amin'ny fitehirizana na eny amin'ny talantalana fivarotana ny vokatra ara-pahasalamana sy avo lenta, ary ny orinasa mpamboly dia hahatratra ny fahombiazana ara-bola irina. . Mirary fizaran-taona vaovao mahomby ho anao izahay!
Ny volana aogositra dia nanangana orinasa mpamokatra zezika iray tany Chine
Natomboka tao amin'ny PRC ny atrikasa voalohany an'ny orinasa "Aogositra" ho an'ny famokarana akora mavitrika ho an'ny vokatra fiarovana ny zavamaniry (CPPP). Andiany voalohany ...
Biopesticides: angano sy zava-misy
Ny orinasa "Aogositra" dia namakafaka ny stereotypes mahazatra indrindra momba ny biopesticides - vokatra fiarovana amin'ny zavamaniry navela hampiasana azy amin'ny vokatra maniry ...
Ny olana eo amin'ny fifehezana ny pestisma any Rosia dia manohintohina ny fanondranana entana an-trano
Ny fitaovan'ny laboratoara an-trano sy ny torolàlana metodolo efa lany andro dia tsy mamela ny fanaraha-maso mahomby momba ny kalitaon'ny bibikely any Rosia ...
Ny tsenan'ny biopesticides eran-tany dia mitombo avo 3,5 heny haingana kokoa noho ny tsenan'ny vokatra fiarovana amin'ny synthetic plant
Ny mpandinika dia manantena fa ny tsenan'ny biopesticides eran-tany dia hitombo avy amin'ny $ 3,8 miliara amin'ny taona 2018 ka hatramin'ny $ 10 miliara amin'ny ...
Fitsipika fanjakàna vaovao nankatoavina tany Azerbaijan
Andian-ovy voatabia Tyumen nalefa tany Ozbekistan